के सबैथोक थोक गुठी हो ? | Ratopati
किसानलाई जग्गा किन नबाँड्ने ?
personविमल पोखरेल exploreकाठमाडौं access_timeअसार ६, २०७६ chat_bubble_outline1
काठमाडौंमा गुठी विधेयकको विरोधमा भनिएको प्रदर्शनमा हजारौं मान्छेहरुले सहभागिता जनाए । सरकारले दुई दिन पहिले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरे पनि प्रदर्शन फिर्ता लिइएन । त्यो विषय आफैमा चाखलाग्दो थियो । किन त्यसो गरियो भनेर । जुन कुराको विरोध गरिएको थियो, त्यो माग पूरा गरिएपछि प्रदर्शनहरु फिर्ता गरिन्छन् । तर गुठी विधेयकको सन्दर्भमा त्यसो गरिएन । सञ्चारमाध्यमहरुले काठमाडौं प्रदर्शनको व्यापक प्रचार गरे । एम्बुलेन्सलाई बाटो छोडिदिएको, प्रहरीलाई फूल दिएको र पानी खान दिइएका कुराहरुलाई पनि अत्यधिक प्रचार गरियो । मानौं कि उक्त प्रदर्शन सिंगो मानव जातिको मुक्तिको लागि भएको थियो ।
ठूलठूला प्रदर्शनहरु सिन्धुपाल्चोक र दाङमा पनि गरिएका थिए । तर सिन्धुपाल्चोक र दाङमा भएका प्रदर्शनहरुलाई सञ्चारमाध्यमहरुले महत्व दिएनन् । भने उपत्यकाबाहिर गुठीमा पुस्तौं देखि रगत पसिना बगाएका गरिब किसानहरुले प्रदर्शन गरेका थिए । निश्चय पनि गरिब किसानहरुका मागहरु जायज छन् । तर गरिबको प्रदर्शनलाई महत्व दिइएन ।
विधेयकले काठमाडौंका गुठीवालाले भनेजस्तै सम्पूर्ण रुपमा यहाँका संस्कार, संस्कृति, मेला र जात्राहरु मासिंदैनथिए । विधेयक पारित भएपछि उपत्यकाबाहिरका सबै किसानले जमिन पाउने पनि थिएनन् । त्यो विधेयकले सबै समस्याको समाधान गर्दै थियो भन्ने कुरा होइन । तर पनि काठमाडौं र उपत्यकाबाहिर फरक फरक प्रदर्शनहरु भए । यो आलेखमा काठमाडौंमा भएको प्रदर्शनबारे चर्चा गरिएको छ ।
आम हिन्दू समुदायले एसिया प्यासिफिक सम्मेलनलाई हिन्दू धर्ममाथिकै हमलाको रुपमा लिएको थियो । उनीहरुलाई केपी ओलीलाई हिन्दूहरुको तागत देखाउने दिन आवश्यक थियो । तिनै केपी ओलीले गुठी विधेयक ल्याएर गज्जबको वातावरण बनाइदिए ।
किन भयो प्रदर्शन ?
केपी ओली र माधव नेपालको आयोजनामा गत वर्ष एसिया प्यासिफिक सम्मेलन भयो । क्रिश्चियन साम्राज्यवादलाई नेपाल र नेपाली जनतामाथि क्रिश्चियन आतंक थोपर्नको लागि उक्त सम्मेलन गरिएको थियो । पिउनेहरुले होली वाइन पिए र शुद्ध भए । मानौं कि तिनीहरु नेपाली भूमिमा अशुद्ध थिए । सरकार प्रमुखबाट नेपाली जनताको भावनाका विरुद्ध ती सारा साम्राज्यवादी गतिविधि भइरहेका थिए, जुन नेपाली जनताले निरीह भएर हेर्न बाध्य थिए । केपी ओलीको दुई तिहाईको दम्भका अगाडि जनता निरीह देखिनु धेरै पीडाको विषय थियो ।
नेपाली कांग्रेस संस्थागत रुपमै उक्त सम्मेलनको विरोधमा थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत कैयौं सांसदहरुले होली वाइन खाएको भन्दै सरकारको तीब्र विरोध गरे । वास्तवमा एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको विरुद्धमा नेपालको सिंगो हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, किराँत समुदाय थियो । सम्मेलनमा बाँडिएको डलर र दिइएको सुविधा लिने व्यक्तिहरुबाहेक उक्त सम्मेलन कसैले समर्थन गर्न लायक नै थिएन । त्यो सम्मेलनको त्यतिबेलै विरोध हुनुपर्दथ्यो, जुन विरोध बुधबार काठमाडौंमा भयो ।
आम हिन्दू समुदायले एसिया प्यासिफिक सम्मेलनलाई हिन्दू धर्ममाथिकै हमलाको रुपमा लिएको थियो । उनीहरुलाई केपी ओलीलाई हिन्दूहरुको तागत देखाउने दिन आवश्यक थियो । तिनै केपी ओलीले गुठी विधेयक ल्याएर गज्जबको वातावरण बनाइदिए । गुठी विधेयकले गुठीहरुको केही अधिकार अवश्य पनि कटौती गर्ने थियो । गुठीको अधिकार कटौतीलाई गुठीका मालिकहरुले धर्म, संस्कृति, मेला, पर्व र जात्राको विरोधको रुपमा बुझाउने गज्जबको मौका पाए ।
वास्तवमा हिन्दू समुदायलाई केपी ओलीका विरुद्ध सडकमै आएर आक्रोस पोख्नु थियो । हिन्दूवादीहरुलाई धर्म निरपेक्षता मन परेकै छैन । उनीहरु नेपाललाई जसरी भए पनि हिन्दू राज्य कायम गराउन चाहन्छन् । उनीहरु भारतको सहयोग लिन पनि तयार देखिन्छन् । गुठीका गुठीयार, मन्दिरका पूजारीहरु, ब्राम्हण, पूरोहितलगायत ठूलो संख्यामा हिन्दू राज्य कायम हुनुपर्छ भन्ने मत रहेको छ ।
गत चुनावमा नेपाली कांग्रेस नराम्रोसंग पछारियो । नेपाली कांग्रेसलाई अहिलेको सरकार मन परेको छैन । उ सरकार बाहिर बस्नु परेको कारणले छटपटाइरहेको छ । उसलाई यस्ता सानातिना निहुँ चाहिएको छ । उसले निहुँ पाउँदा साथ सडक र सदनमा जे पनि गर्न तयार भएर बसेको छ । सदनमा केपी ओली कि शेरबहादुर देउवा, को पहिला बोल्ने भन्ने विषयमा झगडा गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन । तर कांग्रेसले त्यही विषयमा निहुँ खोजेर सदन अबरुद्ध बनायो । कांग्रेसलाई जसरी पनि यो सरकारलाई बदनाम गराएर आगामी चुनावमा आफ्नो पक्षमा जनमत गराउनु छ ।
निश्चय पनि राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राधेश्याम अधिकारीलगायत केही सांसदहरुको चलाखीपूर्ण तुरुप काम लाग्यो । गुठीमाथि नियन्त्रण गर्न खोजिएको कुरालाई सिंगो नेवार संस्कार, संस्कृति, मेला, पर्व र जात्राको विरुद्ध विधेयक छ भन्ने कुरा प्रचार गर्न सजिलो भयो । उपत्यकामा कांग्रेसको जुन संगठन थियो, त्यो संगठनलाई कांग्रेसले व्यापक मात्रामा परिचालन ग¥यो । यदि कांग्रेसले काठमाडौंको सारा संगठन परिचालन नगरेको भए, गुठीयार मात्रैले त्यति ठूलो जुलुस निकाल्ने सम्भावना थिएन ।
कांग्रेसको ठूलो तप्का राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको पक्षमा छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा धेरै व्यक्तिहरुले हिन्दू राज्यको लागि वातावरण बनाउन पहिलेदेखि प्रयत्न गर्दै आएका छन् । त्यसको लागि उनीहरु राजावादी, हिन्दूवादीहरुसंग सहकार्य गरेर जान तयार छन् । देशमा खाली त्यो वातावरण तयार नभएका कारण नै कांग्रेसहरु मौन जस्तै देखिएका छन् । वास्तवमा उनीहरु मौन छैनन् । उचित वातावरणको पर्खाइमा छन् । गुठी विधेयक एउटा उचित वातावरण थियो । त्यो वातावरण निर्माणको लागि कांग्रेसले संस्थागत रुपमै धेरै मेहनत गरेको छ ।
राजावादीहरुले हिन्दू धर्मलाई देखाएर आफ्नो गुमेको स्वर्ग फिर्ता गर्न चाहन्छन् । उनीहरुको त्यो स्वभाविक चाहना पनि हो । सत्ता पल्टेका धेरै शासकहरुले त्यो चाहना राख्छन् नै । राजा ज्ञानेन्द्र देशका सबैजसो मठमन्दिरमा पुगेर हिन्दूवादीहरुको समर्थन जुटाइरहेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा हिन्दू राज्य कायम गर्न चाहन्छन् । कुरा हिन्दू राज्यको मात्रै होइन कि राजावादी र प्रतिगामीहरु हिन्दू राज्यको बहानामा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न चाहन्छन् । र उनीहरुलाई सबैभन्दा ठूलो बहाना भनेकै धर्म हो ।
नेपालमा झण्डै ८१ प्रतिशत हिन्दू भएका कारणले उनीहरुलाई हिन्दू राज्यको लागि वातावरणको निर्माण गरिरहेका छन् । नकारात्मक रुपले सही, एसिया प्यासिफिक सम्मेलनले त्यो वातावरण कुनै न कुनै रुपले बनाइदिएको छ । धर्म निरपेक्षता भनेको क्रिश्चियन साम्राज्यवाद हो भन्ने कुरा हिन्दू धर्म मान्ने सामान्य मान्छेको बुझाइ रहेको छ । राजावादीहरुले सकेसम्म यति सुन्दर वातावरणको उपयोग नगर्ने कुरै भएन । राजावादीहरुले कांग्रेसको राजसंस्था र हिन्दू धर्मका पक्षपातीहरुसंग सहकार्य गर्न चाहन्छन् । कांग्रेसमा राजावादीहरु र हिन्दूवादीहरुको ठूलो जनमत हुनु उनीहरुको लागि उपयुक्त अवसर पनि हो ।
काठमाडौंमा अहिले यस्तो प्रचार गरिएको छ कि गुठी नै सबै थोक हो । यसलाई कहींकतै चलाउनै पाइन्न । छुनै पाइन्न । यसलाई छोयो भने काठमाडौं उपत्यकाका सबै संस्कार, संस्कृतिहरु मासिन्छन् । संस्कार जोगाउनको लागि गुठीलाई यही रुपमा सञ्चालन गरिनुपर्दछ, सुधार गर्नै पाइदैन ।
धर्म परिवर्तन बन्द गर
धर्म निरपेक्षताको आडमा क्रिश्चियनहरुले जसरी धर्म परिवर्तन गराउँदै हिंडेका छन्, त्यसको पीडा हिन्दूहरुले बढी नै व्यक्त गरेको देखिन्छ । धर्म परिवर्तनलाई सरकारले खुल्ला छोडिदिएको छ । कुनै रोक लगाएको छैन । अहिले पनि गाउँ गाउँमा पैसा, प्रलोभन देखाएर धर्म परिवर्तन गराइएको छ । जुन संविधानअनुसार दण्डनीय कार्य हो । सरकारले खुलमखुला संविधानतः दण्डनीय कार्यलाई छुट दिनु बहुसंख्यक हिन्दूहरुको लागि मान्य छैन भन्ने कुरा केपी ओलीले बुझ्न आवश्यक छ ।
धर्म, संस्कार, संस्कृति जहाँ जस्तो अवस्थामा छन्, त्यस्तै अवस्थामा छोडिदिनुपर्दछ । आवश्यकता अनुसार तिनमा जनता आफैले परिमार्जन, परिवर्तन गर्दै जान्छन् । तर जसरी धर्म परिवर्तन गराइएको छ र सरकारले तिनीहरुलाई संरक्षण गरिरहेको छ, वास्तवमा सरकार आफै संविधान विरोधी आपराधिक कार्यहरुलाई संरक्षण दिइरहेको छ । यो कुनै पनि नेपाली जनतालाई सैह्य छैन र हुनु पनि हुँदैन ।
यदि सरकारले धर्म परिवर्तनलाई कडाई पूर्वक नरोक्ने हो भने हिन्दूहरु सरकारका विरुद्ध उपयुक्त समयमा सडकमा आउने खतरा रहन्छ । त्यो धर्म निरपेक्षताको लागि खतरा हो । एकातिर धर्म परिवर्तनलाई कडाई पूर्वक प्रतिबन्ध लगाउनु आवश्यक छ भने अर्कातिर हिन्दू अतिवादी गतिविधिहरु हुन नदिन सचेत रहनुपर्दछ ।
काठमाडौंमा अहिले यस्तो प्रचार गरिएको छ कि गुठी नै सबै थोक हो । यसलाई कहींकतै चलाउनै पाइन्न । छुनै पाइन्न । यसलाई छोयो भने काठमाडौं उपत्यकाका सबै संस्कार, संस्कृतिहरु मासिन्छन् । संस्कार जोगाउनको लागि गुठीलाई यही रुपमा सञ्चालन गरिनुपर्दछ, सुधार गर्नै पाइदैन । गुठीहरुलाई नियमन गर्नै पाइन्न, तिनीहरुलाई छोयो भने सबैथोक समाप्त भएर जान्छ, यस्तै यस्तै तर्कहरुले बजार, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका भरिएका छन् । यो यति गएगुज्रेको सोचाइ हो कि त्यसको अन्तर्यमा लुट र भ्रष्टाचारको धन्दा लुकेको छ ।
दाङका थारुहरुले गुठी विनै माघी मनाएकै छन् । सुदूरपश्चिममा गुठी विनै जनताले देउडा खेलेकै छन् । तराईमा गुठी विनै छठ मनाइएकै छ । करोडौं जनताले कुनै पनि गुठी विना घरघरमै दसैंतिहार जस्ता मेलापर्व मनाएकै छन् । उधौली, उभौली, तामाङ, राइ, लिम्बुका पर्वहरु, तीज, जनैपूर्णिमा लगायत सबै चाडपर्वहरु मनाइएकै छन् । हरेक जातजातिले आफ्ना कुलपूजा मनाइहेकै हुन्छन् । ती मनाउनको लागि कुनै गुठी चाहिएका छैनन् । सानातिना गुठी भए पनि तिनले काठमाडौंमा जत्तिको लुट मच्याएका छैनन् । काठमाडौंका संस्कार र संस्कृति चाहिं महान्, अरु सबै गएगुज्रेका हुन सक्दैनन् । सबै संस्कार, संस्कृति, मेला, जात्रा पर्वहरुलाई राज्यले समान व्यवहार गरिनुपर्दछ । कसैलाई गुठीको नाममा लुट्न दिने, कसैका संस्कार संस्कृतिहरु नासिंदै जाँदा पनि वास्ता नगर्ने हुन सक्दैन ।
यसो भन्नुको अर्थ गुठी बन्द हुनुपर्छ भनिएको होइन । तर गुठी मात्रैले सबै संस्कार, संस्कृति र चाडपर्वहरु धानिएका छन् भन्ने जुन भ्रम छर्न खोजिएको छ, त्यसो होइन । कुनै पनि चाडपर्व, संस्कार, संस्कृति जनताको स्तरबाट स्वतःस्फूर्त मनाइने कुरा हुन् । गुठी खडा गरेर, त्यही गुठीको आडमा २, ४ जना ठालुहरुले लुट मच्याउने जुन धन्दा गुठीको नाममा सदियौंदेखि भइरहेको छ, त्यो धन्दालाई बन्द गरिनुपर्दछ । त्यो धन्दा बन्द गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ गुठी बन्द गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । गुठीहरुलाई वैज्ञानिक, व्यवहारिक, पारदर्शी र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनुपर्दछ । गुठीको नाममा भइरहेका जनतामाथिका शोषणहरुलाई अन्त्य गरिनुपर्दछ । त्यस्ता लुटका धन्दा बन्द हुँदा कुनै पनि संस्कार र संस्कृति, कुनै पनि चाडपर्व मासिंदैनन् ।
विधेयक समाधान थियो ?
अहिले गुठी विधेयकको विरोध गरेर लुटको धन्दालाई जसरी वैधानिक बनाउन खोजिंदैछ । त्यो धेरै नै घातक छ । अहिले ल्याइएको गुठी विधेयकले समस्याको समाधान गर्दैन भने त्यसमा भएका कमजोरीहरुलाई सच्याउनुपर्छ । संस्कार, संस्कृतिलाई असर पर्ने प्रावधानहरु छन् भने हटाइनु पर्छ । तर गुठीको नाममा भइरहेको लुट र ठगी धन्दालाई कडा कानुनको निर्माण गरेर रोक्नुपर्छ । गुठीको पैसा कहींकतै देखाउनु नपर्ने, राज्यलाई कर तिर्नु नपर्ने, २, ४ जना ठालुहरु मिलेर धर्म, संस्कार, संस्कृति, जात्रा र पर्वको नाममा लुटिरहन दिन सकिंदैन, दिइनु हुँदैन ।
गुठीको नाममा हजारौं विघा जमिन सयौं वर्षदेखि भइरहने, त्यसबाट एउटा वर्गले लुट मच्याइरहने, त्यही जग्गा पुस्तौंदेखि खनजोत गर्दै आइरहेका जनताको हातमा एक हात पनि जमिन नहुने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्दछ । पुस्तौंपुस्तादेखि जग्गाविहीन गरिब जनताको अधिकार स्थापित गरिनुपर्दछ । त्यसो गर्दा कोही कसैका संस्कार, संस्कृति, मेला, पर्व, जात्राहरु नासिंदैनन् ।
मन्दिरको नाममा जग्गा जमिन छ, भगवानको नाममा जग्गा जमिन छ । तर त्यही जग्गा पुस्तौंपुस्ता देखि खनजोत गर्दै आएका किसानहरुको नाममा जानुपर्छ कि पर्दैन ? यो गम्भीर प्रश्न हो । जमिनमाथि किसानको अधिकार स्थापित गर्नको लागि अब किसानहरुसंग संघर्ष बाहेक कुनै विकल्प बाँकी छैन । गरिब किसानहरुको पक्षमा कानुनहरुको निर्माण गर्नको लागि संघर्ष जुन भइरहेका छन्, ती पर्याप्त छैनन् । अझै बलियो बनाउनुपर्दछ ।
June 21, 2019, 3:46 p.m. Hoinara?
Hoina communist bhaneko christian nai hota. Yo mero desh lai christian le dherai satayo koparyo. Afno nihit swartha ko lagi samaj dharma sanskriti bechne ko kunai pani kura bichar na sochaniya hunchha na sunnu, manan garnu parne wajandar hunchha, kinaki tyo sabai bichar prayojit hunchha.